Kolyada (एक छुट्टी): इतिहास र परम्परा
अधिकांश मानिसहरू आजकल क्रिसमस र Kolyada inextricably लिङ्क छन् भन्ने विश्वास गर्छन्। वास्तवमा, मूर्तिपूजक पटक भएकोले त्यहाँ हुँदा पनि स्वीकार ख्रीष्टियन रूस मा, र विभिन्न देवताहरूको विश्वास गर्ने मान्छे, पहिले नै Kolyada रूपमा परम्परा अस्तित्व। यो पर्व स्वर्गमा Dazhdbog परमेश्वर समर्पित थियो।
प्राचीन मानिसहरू पछि विश्वास शीतकालीनक्रान्ति, कम गर्न - परमेश्वर आकाश माथि wakes र रात दिन लम्बाइ वृद्धि गर्न सुरु, र। हाम्रा पुर्खाहरूले कृतज्ञ Dazhdbog थिए र अनुष्ठान गीतहरूको मद्दत उहाँलाई प्रशंसा गर्न थाले - carols।
त्यो समय देखि, धेरै भन्सार परिवर्तन र भूल, तर अझै पनि धेरै परम्परा, एक केहि फरक फारममा albeit, हामी आज पालन।
पर्व को सार
Kolyada - को Slavs, आज ग7जारी जो जनवरी 19 (बप्तिस्मा) गर्न क्रिसमस र क्रिसमस समय, को लोकप्रिय नाम को छुट्टी।
Kolyada को मुख्य उद्देश्य - क्रिसमस हव्वाले समर्पित समारोह पकड छ। एक ठूलो वा कम डिग्री गर्न संरक्षित गरेको छ, र हाम्रो समय मा मुख्य परम्परा, हो:
- पोशाकहरू को एक किसिम मा राख्दै, पशु खाल र जनावरहरूको सीङ बनेको विशेष मा, मास्क प्रयोग;
- caroling, बमोजिम kolyadnyh गीतहरू;
- धन्यवाद उपहार र kolyadovschikov आफ्नो मिठाई, भोजन, सिक्का र अन्य कुराहरू;
- युवा मान्छे को लागि खेल;
- प्रेतविद्यासम्बन्धी अविवाहित बालिका।
Kolyada - यो अब केवल रूपमा सबै मसीहीहरूलाई क्रिसमस, अन्यजातिहरूको को समय संग हिउँदमा सबै भन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो जो छुट्टी।
जब क्रिसमस Carols मनाउन
Kolyada - को Slavs को छुट्टी, मिति जो सुरु Yule (डिसेम्बर 25 - को शीतकालीनक्रान्ति दिन), र तिनीहरूले6जनवरी सम्म जारी राखे। त्यसैले, पनि मसीहीधर्म ग्रहण अघि, मान्छे क्रिसमस Carols संस्कार आकाश को परमेश्वरको प्रशंसा खर्च - Dazhdbog।
मसीहीधर्म ग्रहण पछि के मिति Kolyada भोज मनाइन्छ थियो? मूर्तिपूजक उत्सव येशू ख्रीष्टको जन्मदिन एकिकृत, र क्रिसमस समय पहिले नै6देखि इपिफ्यानी Name गर्न क्रिसमस देखि 19 डिसेम्बर, टी। ई गर्न उल्लेख गरे। यी क्रिसमस परम्परा अहिले सम्म बाँचे छन्।
सम्बन्ध solstice र क्रिसमस Carols
Kolyada भोज को शीतकालीनक्रान्ति मा सूर्य गरेको rebirth को सम्मान मा मनाइन्छ। तिनीहरूले यो दिन नयाँ विश्व र कृषि गतिविधिहरु को उद्भव हो भनेर विश्वास - डिसेम्बर 25 मानिसहरू नयाँ वर्ष मनाइन्छ छैन।
Kupala (को ग्रीष्मऋतुक्रान्ति परमेश्वर) र Kolyada (को शीतकालीनक्रान्ति देवता) - ए Famintsyn ", पुरातन Slavs को Deity" भनिने पुस्तक 1884 मा लिखित मा, पुरातन धर्मशास्त्रमा दुई देवताहरूको उल्लेख छ कि औंल्याए।
ए एन Afanasev "को Slavs को प्रकृति मा कवितात्मक दृश्य" लेखन मा सूर्य एक खुशी र ईश्वरीय जीवनको personification थियो उल्लेख गरे। सौर deity सबैभन्दा, उज्ज्वल दयालु र कृपालु छलफल भएको थियो; कि, जीवन सबै जीवित जीव उत्प्रेरित गर्छ मानिसहरूलाई खाना र सहायता प्रदान गर्दछ।
आफ्नो कठिनाइ र असफलता पछि लाग्दा जब मान्छे मदतको लागि उहाँलाई सोधे त्यसैले यो ज्योति inextricably भाग्य संग जोडिएको छ भन्ने विश्वास थियो। साथै, सूर्य दुष्ट, अन्धकार र चिसो प्रतिरोध थियो।
यसरी, क्रिसमस carols को स्लाव भाषाहरु छुट्टी Kolyada र प्रदर्शन - यो रीतिथितिहरू सूर्य देवता, जुन विशेष सम्बन्ध Luminary हाम्रो पुर्खाहरूको देखाउन समर्पित।
छुट्टी को व्याख्या
Kolyada - मूर्तिपूजक छुट्टी, र यसको नाम प्राचीन समयमा यसको जरा छ।
शब्द "Kolyada" को मूल बारेमा सिद्धान्त को एक यो "colonies" बाट भयो कि जोर - "। सूर्य" यो अन्धकार मानिसहरूलाई सुरक्षा र डिसेम्बर 25 नयाँ र युवा तारा, ज्योति दिन वृद्धि गर्न र रात घट्यो मदत गरेको छ जो जन्म भएको थियो।
विभिन्न राय दिमित्री Shchepkin पालन, र यो शब्द "Kolyada" अर्थ "पाइ भोजन वा पाइ व्यञ्जन", "वरिपरि चलिरहेको" तथ्यलाई मा हुन्छन्। यो कम्पनी सबै गज मा carols को गुफा गए भन्ने danced र क्रिसमस carols गाए, तिनीहरूले सँगै खाना खाए पछि जो nakolyadovali यो उपहार लागि उनलाई पुरस्कृत र तथ्यलाई द्वारा बताए गर्न सकिन्छ।
साथै, त्यहाँ राय हो "Kolyada" शब्दहरू आउँछ कि:
- "डेक" - एक रुखको ठूटो रोशनी;
- "Kolo" - राउन्ड, पाङ्ग्रा;
- ल्याटिन शब्द "Kalenda," बाट अर्थात्, "महिनाको पहिलो दिन" ...
को etymological शब्दकोश शब्द को अर्थ पूर्व-मसीही पटक पनि विशिष्ट छ, "वर्ष को शुरुवात संग सम्बन्धित छ जो एक कस्टम" को रूपमा व्याख्या गरिएको छ, र स्लाव भाषाहरु छुट्टी Kolyada मा मसीहीधर्म ग्रहण पछि मा येशू ख्रीष्टको जन्म दिन सुरु भएको थियो।
को ethnolinguistic शब्दकोश (प्राचीन स्लाव भाषाहरु) अनुसार, शब्द मूर्तिपूजक जरा छ। (: वा "नयाँ वर्षको लागि सामग्री" "पादरीहरूले संकलित थिए जो उपहार वा प्रसाद," शाब्दिक) र डर Kolyada पूर्व-स्लाव भाषाहरु र मूर्तिपूजक केहि पनि छैन, र यो शब्द पादरी अभिव्यक्ति रूपमा भन्दा लिएको थियो तर्क छ।
कसरी क्रिसमस Carols को भोजको लागि तयार?
Kolyada - सबै भन्दा ठूलो थियो जो छुट्टी, र मान्छे को लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा। यो आधारमा एक अग्रिम र ध्यानपूर्वक यसको लागि तयार तर्क गर्न सक्छ। साधारण मान्छे (पनि poorest परिवारबाट):
- खाना, विशेष मासु, र यो pricked सुँगुर को एक ठूलो मात्रा तयार;
- घर भर राम्ररी सफा;
- यो स्नान मा राम्रो-खोसिएर नाङ्गै;
- caroling लागि विशेष नयाँ पोशाकहरू, तयारी।
एउटा कुरा अपरिवर्तित बाँकी छ: अब हामी दुवै शारीरिक र आध्यात्मिक purified नयाँ वर्ष बिदा पूरा गर्ने लक्ष्य कसरी लामो पहिले, र।
लामो Kolyada मनाइन्छ गरिएको छ?
सबैभन्दा मानवशास्त्रीहरूले पनि पूर्व-मसीही समयमा अनुकूलन, को Kolyada रूपमा थियो सहमत हुनुहुन्छ। छुट्टी कथा रोचक र रोमाञ्चक छ, धेरै परम्परा र संस्कार हाम्रो समय बाँचे, तर जबर्जस्ती अब केही कुनै र परिवर्तन गरिएको छ।
क्रिसमस Carols र समारोह को उत्सव निम्न क्रममा आयोजित थिए:
1 को उत्सव को पहिलो भाग मानिसहरूको ठूलो संख्या बलिदानको एक अनुष्ठान उत्पादन र तिनीहरूलाई नजिकको बन्न, देवहरूको संग कुराकानी गर्न मूर्तिपूजक मन्दिर (मन्दिर) आए भन्ने तथ्यलाई थियो।
को पौराणिक कथा मा भन्यो, मान्छे आगो नजिकै, नदी नजिकै जम्मा भएको जंगल र धन्यवाद र पश्चात्ताप र भविष्यमा लाभ माग्दै, आफ्नो देवताहरूलाई प्रशंसा गरे। आफ्नो अनुहार यसरी पकड थिए भाले, जनावर, बलिदान र प्रेतविद्यासम्बन्धी को ढाल र सीङ, embellished थिए मास्क, यी र अन्य लुगा को खाल मा लुगा।
देवहरूको एउटा लिङ्क प्रदान गर्ने एक व्यक्ति - बलिदान र प्रेतविद्यासम्बन्धी को अनुष्ठान को लागि एक जादूगर आवश्यक। परिवार मा, भूमिका एक वरिष्ठ मान्छे हो। प्रेतविद्यासम्बन्धी अघि सामान्यतया बलिदान चरा वा जनावरको प्रदर्शन। यस मामला मा, रगत गिरा र दुष्टात्मा बन्द वार्ड वरिपरि splashed। पशु भागहरु खाना को लागि अभिप्रेरित छैन भनेर, जमीन मा गाडे, आगो मा जलाइएको वा नदी मा डुबेर मर्छन्।
एल्डरहरूले देवतालाई pleading पाल्तु जनावर मारे। त्यतिबेला जवान बालिका र, केटाहरू र छक्क परे, र Kolyada प्रशंसा जो क्रिसमस carols, गाए - एक जवान सूर्य भगवान।
2. दोस्रो भाग सामान्य Kolyada भोजन समर्पित थियो। मान्छे बलिदान गरिएको खाना, हामी सर्कल वरिपरि पारित जो कप देखि बारी मा पिए खान्छन्। यसरी देवताहरूको नवी र नियमहरु प्रशंसा, carols गाया र राम्रो मान्छे को लागि मद्दत मागे।
3. को उत्सव को तेस्रो भाग थिए तथाकथित "merrymaking": मान्छे, गीतहरू विभिन्न गाए पनि स्लाव भाषाहरु लोक साधन गर्न danced।
क्रिसमस Carols को भोज (रवि गरेको) आफ्नै भन्सार र peculiarities, र अर्को दिन थियो:
- पहिलो, हामी केही मान्छे मा caroling बच्चाहरु जानुहोस्। तिनीहरूले बराबर भागमा विभाजित भएको थियो र सबै क्रिसमस carols को प्रदर्शन पछि खाए जो2पाइ, लिए।
- जब जवान बालिका (दुल्हन) थिए र लोक गीतहरू गाए। हामी तिनीहरूलाई सबै केही kalaches र Gingerbread दिनुभयो।
- अन्तमा जाने सबै महिला र पुरुष caroling, तिनीहरूले पनि दिइएको थियो र केक, र कुकीहरू।
क्रिसमस Carols को लिपि
र आज, छुट्टी मनाइन्छ? छ रूपमा Koliada को भंवर औपचारिक चल्छ मा विस्तार। लिपि थियो र अझै पनि विभिन्न मानिसहरूले गरेको छन् भनेर थपिएको र परिवर्तन को बाबजुद, रूपमा निम्नानुसार छ:
1 क्रिसमस हव्वाले (जनवरी 6), मान्छे साँझ सम्म खान थिएन। तर बित्तिकै आकाश पहिलो तारा देखा रूपमा तिनीहरू सबै खाने परिवार बसे। मा साँझ तालिका आवश्यक kutya र सुकेको फल (स्याउ र नाशपाती) को uzvar, साथै हार्दिक मासु व्यञ्जन (प्यानकेकहरू, भरी बन्दागोभी, पकौडी, घर sausages) सहित 12 कोर्स, हुनुपर्छ।
Schedretsa - समय देखि हाम्रा पुर्खाहरूले अतिप्राचीन जनवरी 14 सम्म त्यहाँ झूठ मानिन्छ थियो जो tablecloth अन्तर्गत घास राख्न कस्टम थियो।
2. अर्को बिहान - जनवरी7- क्रिसमस को सबै भन्दा ठूलो जाडो तिहार आउँछ। यो विशेष दिन मा, हामी आफ्नो godson जान, र तिनीहरूलाई उपहार दिन निर्णय गरे।
खाना पछि, जवान बालिका र केटाहरू फरक जनावर र रोम मा पोशाक र 10-15 मान्छे carols समूहहरूसँग जानुहोस्। एक बाख्रा पोशाक अनिवार्य kolyadovschikov कम्पनी को। केही क्षेत्रहरु (विशेष पश्चिमी युक्रेनमा) मा म एक ठूलो घर बनाएको ताराले जाने निर्णय गरे। Kolyada राम्रो भविष्य, नृत्य र मजा लागि सोधेको, पृथ्वी को प्रशंसा मा गीतहरू गाउन। यो उदार होस्टहरूको लागि तिनीहरूलाई धन्यवाद र विभिन्न उपहार र पैसा दिन।
यो मालिकको ढोका Kolyada अनलक छैन भने, यो परिवार र गरिबी मा प्रकोप आमन्त्रण सक्ने विश्वास थियो।
3. क्रिसमस पछि अर्को स्टेटस्टेफन को एक दिन थियो। त्यही दिन, मालिक पूर्णतया आफ्नो कार्यकर्ता तिर्नको थियो, र तिनीहरूले बारी मा, गत वर्ष भन्दा बढी संचित थियो सबै बनाउन सक्छ। त्यसपछि सहयोग वा diverge को लडी लागि नयाँ सम्झौता प्रवेश गर्न चाहे निर्णय।
सानो अलग मनाइन्छ शहरी बासिन्दा यस स्लाव भाषाहरु छुट्टी (Kolyada)। आफ्नो लिपि निम्न थियो:
- एक उत्सव कार्यक्रम र पार्क मा र शहर को केन्द्र मा पर्वहरू पूरा;
; व्यापार मेला को संगठन -
- बल र नृत्य (धनी नागरिक लागि प्रबन्ध)।
बच्चाहरु, साथै आज, क्रिसमस ट्री, उपहार, नाटकहरू र नृत्य कार्यक्रम जाँदै आनन्द सकेन।
4 मजा र Schedrets जनवरी 14 मनाउन। यो दिन मा, मात्र गाइरहेका र नृत्य, तर पनि गाउँ को सबै भन्दा सुन्दर केटी रोजे। उनले घर र schedrovali गर्न घर बाट गए जो सुंदरियों, एक टोली नेतृत्व, एक पुष्पांजलि, रिबन मा राखे, लुगा। को पाहुना र दिनमा रूपमा सर्वश्रेष्ठ तपाईं यसलाई सफल र धनी थियो आगामी वर्ष उदार इनाम दिनु थप गर्न सक्छन् र खोजे।
क्रिसमस बिदा समयमा kuti ठाउँ kolyadnyh
पुरातन Slavs को Kolyada भोजमा बिना kuti पार गरेनन्।3तयार थियो प्रत्येक जो विशेष पवित्र साँझ र अनुष्ठान porridge, wherein फरक थिए:
1 पागल, सुकेको फल, अफीम बीउ र uzvar पहिलो पूर्व-क्रिसमस साँझ लागि तयार संग दुबला -6जनवरी। यो ठूलो kutey को यस्तो गडबड भनिन्छ।
2. जनवरी 13 - दोस्रो kutyu पकाएको, धनी वा उदार भनिन्थ्यो जो - पुरानो शैलीमा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या। यो दिन मा तालिका मा राम्रो हार्दिक सबै प्रकारका सेवा, र porridge बोसो, सुंगुरको बोसो, घिउ र skorominoyu भरिएको थियो।
3. तेस्रो kutya - जनवरी 18 मा इपिफ्यानी Name को पूर्वसन्ध्या - भोक रूपमा जस्तै भनिन्छ र थियो थियो, पहिले दुबला, पानी मा पकाएको। त्यहाँ साँझ परिवारको टाउको बाहिर जाने र सबै फाटक, ढोका र घरमा र परिवार दुष्टात्मा, misfortune र खराब मौसम देखि को बासिन्दा रक्षा गर्न Crosses आकर्षित गर्न भन्ने तथ्यलाई थियो कि एक परम्परा थियो।
सोभियत समयमा रूस मा Kolyada छुट्टी लगभग मनाइन्छ, तर 60s मा धीरे स्लाव भाषाहरु परम्परा पुनर्जीवित गर्न थाले, र पूर्ण स्विंग रूसी परिवार फर्कन थाले मा 90 को दशक मा उनि पहिले नै थिए। आज, पवित्र रात carols गाइरहेका -,6देखि7जनवरी धेरै भन्सार फिर्ता आउने संग: बच्चाहरु र युवा मान्छे उत्सव पोशाक मा पोशाक, एक ताराले, लिन लोक गीतहरू सिक्न। मालिकको, बारी मा, वर्ष सफल र धनी थियो Kolyada उदार धन्यवाद गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
प्रेतविद्यासम्बन्धी बिदा राख्न क्रिसमस Carols
उत्सव क्रिसमस Carols दिनमा प्रेतविद्यासम्बन्धी एक विशेष ठाउँ कब्जा, तिनीहरूले सामान्यतया क्रिसमस को पूर्वसन्ध्या मा साँझ खर्च र 14 जनवरी सम्म (नयाँ वर्ष पुरानो पात्रो अनुसार)। यो ती दिन थियो कि एक केटी आफ्नो भाग्य जान्न र दुलही हेर्न र पनि विवाह को मिति भविष्यवाणी, भविष्यमा को रहस्य लेगी सक्नुहुन्छ विश्वास थियो। त्यहाँ धेरै संस्कार थिए। सबैभन्दा यी लोकप्रिय निम्न छन्:
1 त्यो बाहिर जाने र बार आफ्ना बायाँ खुट्टा संग जूता फेंक थियो। त्यसपछि यो कसरी फसे हेर्नुहोस्। उनीहरू त्यहाँ, भन्न र श्री दायाँ लागि प्रतीक्षा छ - घर को खुट्टाको औंलासम्म, तर यो वर्ष त्यो विवाह गर्नुभएन भने, विपरीत यदि, त्यसपछि के दिशा मा संकेत बुट हेर्नुभयो।
2. Braley2सुई, आफ्नो बोसो वा बोसो गंदा र पानी कम। तिनीहरूले तुरुन्तै sank भने, यो खराब वर्ष portends र afloat रहेका, तर अझै पनि एकताबद्ध भने, यो पर्खाइ, धनी र आसन्न विवाह लायक थियो।
3. गाद र अल्छी हुन। को woodshed बाट जवान केटी आँखा बंद एक रुखको ठूटो झिकेर र ध्यानपूर्वक यो जांच। यसलाई कुनै न कुनै थियो भने, प्रतिबन्ध भद्दा उपस्थिति, यदि चिल्लो र पनि साथ हुनेछ, भविष्यमा पति सुन्दर र stately छ। एक रुखको ठूटो मा छलछामको गाँठो एक धेरै मान्छे भाइबहिनीको धेरै संग एक परिवार हो भनेर औंल्याए। इन्जेस्टेड र बाङ्गो लग pokruchennoe भने, दुलही बाह्य कमजोरीहरू (वक्र pockmarked र टी। डी) छ
4 छल्ले मा Guessing। धातु, चाँदी, सुन र पत्थर, र यो राम्रो तरिकाले सबै भड्काए: यो एक चलनी कुनै पनि अनाज वा राई, गहुँ, भरिएको र यहाँ छल्ले को4प्रकार राख्नु भन्ने तथ्यलाई मा शामिल थिए। यो अन्त गर्न, कम्पनी सामग्री को एक मुट्ठी द्वारा scooped छ प्रत्येक जो को अविवाहित बालिका, को प्रेतविद्यासम्बन्धी लाग्नुभएको थियो:
- मात्र भर अन्न, तर यो वर्ष त्यो सबै विवाह भएको छैन भने;
- यदि एक सरल धातु घन्टी त्यो एक गरिब मान्छे विवाह हुनेछ;
- यदि एक चाँदी रिङ, दूल्हा सजिलो हुनेछ;
- एक पत्थर घन्टी Boyar संग पारिवारिक जीवन भविष्यवाणी;
- एक सुन घन्टी - व्यापारी को केटी विवाह गर्ने एक चिन्ह।
5 त्यहाँ जसको लागि तपाईं कदर उनको पति, अन्य बायाँ खाली नाम लेख्न, एक कचौरा लिन र अन्न यसलाई भर्न कागज को टुक्रा पकाउन, जो एक चाहनुहुन्छ एक प्रेतविद्यासम्बन्धी पनि छ। अन्न को एक मुट्ठी लिन र समय कागज को coveted टुक्रा पतन हुनेछ के देखो:
- सुरुमा भने, केटी छिटो विवाहपूर्वको आशा हुँदैन;
- दोस्रो - त्यसपछि तपाईंले केही कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने;
- तेस्रो - तपाईं धोखा छ जवान, यो उहाँलाई विश्वास गर्न राम्रो छ;
- चौथो - तपाईंले गर्न पूर्ण indifferent मान्छे।
युवा बालिका पनि छक्क परे:
; को स्नान मा मध्यरातमा -
- ऐना उसलाई betrothed राखेका हेर्न;
- पानी र मोमबत्ती मा।
मुख्य परम्परा को एक पाङ्ग्रा स्केटिङ थिए। यो अन्त गर्न, एक पाङ्ग्रा रूपमा ठूलो काठको सर्कल आगो मा सेट र उकालो र ओरालो रोल्ड। यहाँ तपाईं स्पष्ट क्रिसमस Carols को स्लाव भाषाहरु परम्परा र संस्कार को सम्बन्ध हेर्न सक्नुहुन्छ, पाङ्ग्रा जल लागि, पक्कै पनि सूर्य सङ्केत, र यो पहाडी अप रोल्ड भन्ने तथ्यलाई ज्योति दिन थपिने मदत गरे।
क्रिसमस carols सामान्यतया सिधै बाहिर घरमा छैन गाया छन्, र। जवान केटी प्रविष्ट गर्न अनुमति सोधे, र त्यसपछि "vinogrado" उत्तर मा व्यापक गाए। जनावर र चरा को रूप मा कुनै केक वा मिठाई, बिस्कुट र अनुष्ठान यहाँ Kolyada उपहार। यी बिस्कुट dolgohranyaschegosya परीक्षण बनाइएका थिए, तिनीहरूले हरेक परिवारको लागि मूल्यवान र महंगा, तिनीहरूले वर्षैभरि राखिएको किनभने, ताकि थिए बर्तन घर र गुणन बाटो गुम्यो छैन। पहिले कुकीहरू यसो, तर देवतालाई सम्बोधन थिए (वा साइन इन Roda रवि) वर्ण, को छवि साथ।
, Caroling अनुष्ठान एक हप्ताको लागि बाहिर थियो 25 डिसेम्बर (क्रिसमस देखि सुरु भएको जुलियन क्यालेन्डर)। यस्तो प्रक्रिया मुख्य विशेषताहरु थिए:
1 स्टार। गज मा ठूलो परिमाण (बारेमा 0.7 मीटर) - - र रोशनी मैनबत्ती तिनीहरूले बलियो कागज बाट यो गरे। तारा उज्ज्वल रंग मा चित्रित, octagonal थियो।
2. गुफा। यो दुई स्तरों संग बक्स बाहिर खिचिएको येशू ख्रीष्टको जन्म कहानी चित्रण गर्ने, काठ को मूर्तिहरु राखिएको थियो।
kolyadovschiki छोटो भक्ति गीतहरू प्रदर्शन, र केवल समूह को एक होस्ट मा आएर व्यवहार र एक सानो पैसा प्राप्त गर्न सक्छ समाधान गर्न Windows अन्तर्गत।
Kolyada - एक छुट्टी, ठूलो गाउँ रूस एक यार्ड एक ताराले 5-10 को समूह देख्न सक्थे जो समयमा, र तिनीहरूलाई प्रत्येक मालिक उदार endowed गर्न खोजे।
छुट्टी को मूर्तिपूजक जरा
त्यसैले के Kolyada? छुट्टी को सार निम्न छ: यो प्राचीन रीतिथितिहरू सूची छ महिमा र जवान मूर्तिपूजक सूर्य भगवान प्रशंसा। धेरै स्रोतहरु अनुसार, Kolyada अझै पनि देवता प्रसन्न चाडहरूमा थियो।
छुट्टी को मूल को मुख्य संस्करण प्रशंसा गर्ने शीतकालीनक्रान्ति मा चमक छ। कि प्रभाव एक पौराणिक कथा पनि छ। Korotun सांप सूर्य र देवी Kolyada मानिसहरूलाई मदत र नयाँ, युवा तारा जन्म दिन भक्षण - Bozic। मान्छे देवी मदत र पशुको छाला र सीङ को प्रयोगबाट डरलाग्दो वेशभूषा मा लाउने, गायन र चर्को कराउछ गरेर सर्प देखि नवजात रक्षा गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। carols एउटा नयाँ युवा सूर्य संसारमा जन्मेको घोषणा गर्न सबै यार्ड मा युवा जान्छ।
मसीहीधर्म ग्रहण पछि, चर्च कडा caroling भन्सार र देवताहरूको उपासना निषेधित, तर यो पूर्ण पुरातन परम्परा र संस्कार उन्मूलन गर्न सम्भव थिएन। तसर्थ, गज Iisus Hristos जन्मेको दिँदै र उहाँलाई प्रशंसा, पुजारीहरू र विश्वासीहरूलाई हिंड्न थाले। यी भन्सार र हाम्रो समय बाँचे। जबकि क्रिसमस carols मालिकहरूको लाइक अक्सर विपरीत छैन उपहार के हामी बच्न खोजे। यसलाई त्यहाँ बाली कोदो हुनेछ लाग्यो थियो Polesie kolyadovschikov विश्वासीहरूलाई, घर गर्न अनुमति छैन थिए, र ती caroling पुरातन अनुकूलन अनुसार, उदार इनाम र धन्यवाद।
रूसी स्वतन्त्रता दिवस। एक छुट्टी वा एक दिन बन्द?
क्रिसमस मा गर्न कुराहरू
Tatyana दिवस - विद्यार्थीहरूको एक छुट्टी
बधाई फेब्रुअरी 23 परिवार मा एक छुट्टी संग बाबाले
1991 तख्तापलट: कारणहरू र नतिजा
चकलेट को रूख: कसरी बनाउने मूल, मीठो प्रस्तुत
के Tsitrosept उपाय गर्न सक्नुहुन्छ? निर्देशन र सिफारिसहरू
संवेदी धारणा र वास्तविकता को प्रतिबिम्ब को प्रक्रिया मा आफ्नो स्थान
वित्तीय विश्लेषण: के के छ र आवश्यक छ
एक कार ऋण कसरी बेच्न? म एक कार ऋण लिनुपर्छ
म6बजे पछि के खान सक्नुहुन्छ
प्रमुख भूमिकाको र अभिनेता। "गाढा दुनिया" राम्रो र खराब बीचको आधुनिक टकराव रूपमा
बुनाइ को मूल masterpieces
निर्माता यूरी Ayzenshpis: जीवनी, मृत्यु फोटो को कारण